Sheybaarka 'Anbotek Photovoltaic Laboratory' (shaybaarka saddexaad ee gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay ee dalka ka jira).
Faa'iidada Qaybta Ganacsiga ee 'Anbotek Photovoltaic'
• Anbotek wuxuu leeyahay qalabka ugu horumarsan xaga maadada photovoltaics. Waxay adeegsaneysaa qalabka baaritaanka sawir-qaadista ee la soo dhoofsaday sida Passan, Lexus, ESPECT, iwm oo la soo dejiyey, isla markaana leh saxnaan sare. Waxay ku siineysaa wadarta tayada dhammaan dhinacyada silsiladda warshadaha oo dhan, laga soo bilaabo horumarinta wax soo saarka, wax soo saarka, iibinta illaa farsamada. Dammaanad
• Waxaan ku siin doonaa kormeero dhakhso leh iyo wareegyo shahaado bixin iyo qiimayaal aad u roon oo kaa caawinaya soosaarayaasha PV inay badbaadiyaan waqtiga imtixaanka iyo kharashyada.
• Aad haysato adeegyo tayo leh, si dhakhso leh uga jawaab celiyaan 24 saacadood maalintii, hagaajiyaan waxtarka adeegga iyo tayada, oo waxay ku siinayaan khibrad adeeg oo aad u taxaddar badan.
• Waa suurtagal in lagu xalliyo dhammaan dhibaatooyinkaaga imtixaanka iyo shahaadooyinka hal meel, taas oo ka dhigaysa caddaynta imtixaanka mid sahlan.
Adeegyada Imtixaanka & Shahaadada
Waxay leedahay tijaabo dhammaystiran oo ah shaybaarka waxqabadka korantada ee sawirka korantada, shaybaarka kalsoonida deegaanka, shaybaarka adkeysiga barta kulul, sheybaarka ultraviolet la dedejiyay, shaybaarka makaanikada makaanikada, shaybaarka silsiladda sawirrada, sheybaarka loo yaqaan 'EVV photovoltaic', shaybaarka sanduuqa isgoyska, iwm. Waxay Gudubtay Gudiga Aqoonsiga Qaranka ee Aqoonsiga Shaybaarka CNAS iyo Shahaadada CMA. Waqtigan xaadirka ah, waxay leedahay awoodda baaritaanka qaran ahaan la aqoonsan yahay ee silsiladda warshadaha oo dhan sida qaybaha volt, qaybaha sawir-qaadista, cayriin iyo walxaha kaabayaasha ah, iyo dhirta tamarta sawir-qaadista. "ANBOTEK Photovoltaic Business Unit" waa hay'ad Jarmal TUV ah oo iskaashatooyin tijaabin ah, waxayna mas'uul ka tahay xaqiijinta qalabka moduleka loo yaqaan 'photovoltaic module' (sanduuqa isgoyska, isku xiraha, gadaal, EVA, silikoon, iwm). "ANBOTEK Photovoltaic Division" wuxuu ku saleysan yahay photovoltaic GB / T 9535, IEC 61215, IEC 616146, UL 1703, IEC 61730, IEC 61646 iyo heerar kale, oo loogu talagalay soosaarayaasha modullada sawir-qaadeyaasha, ganacsatada, iwm, si loo fuliyo adeegyada tijaabada saddexaad. . Bixi CE, UL, CQC iyo adeegyo kale oo shahaadooyin qaran ah.
Kormeerka Saldhigga Korantada
"Qaybta 'Anbotek Photovoltaic Division' waxay ku saleysan tahay IEC62124, IEC 62446, CNCA / CTS0004 iyo heerar kale, oo loogu talagalay dhismaha nidaamka sawir-qaadista iyo hawlwadeennada, si loo fuliyo tijaabada saldhigga korantada ee saddexaad, aqoonsiga, adeegyada aqbalaadda. Illaa iyo hadda, waxaa jiray in ka badan 100 mashruuc oo isugeyn ah oo loogu talagalay baaritaanka warshad tamarta PV iyo adeegyo qiimeyn taxaddar leh oo dhinaca warshadaha ah, iyo in ka badan 100 qaybood oo adeegyo ah oo loogu talagalay adeegyada kormeerka imaatinka moduleka PV iyo baaritaanka shaybaarka moduleka PV.
Nidaamka dhismaha ee mashruuca saldhigga tamarta sawir qaadaha, "Waaxda Ganacsiga ee Anbotek Photovoltaic" waxay siisaa macaamiisha kormeerka moduleka PV iyo kormeerka wax soo saarka PV iyo adeegyo kale si loo hubiyo in qaybaha saldhigga korontada iyo rogayaasha ay ku jiraan soo iibsiga, soo saarista iyo goobta ku rakibidda. . Naqshadeynta iyo shuruudaha aqbalaadda. Adeegyadeenna kormeerka xirfadeed, macaamiisha waxay ku iibsan karaan alaab tayo sare leh qalabka wax soo saarka, si wax ku ool ah ayey u yareeyaan kharashka hawlgalka ee dhirta korantada iyo heerka guuldaraysta ee soo socda, si xilliga dakhliga ee maal-gashiga tamarta sawir-qaadista uu u ahaado mid xasilloon muddo dheer.
Mashruuca yareynta faqriga ee dowladda
Mashruuca yareynta faqriga ee PV wuxuu bartilmaameedsanayaa "mashruucyada faaidada korontada loo qeybiyo" oo laga dhisay tuulooyinka saboolnimadu ku dhacday, qoysaska saboolka ah, iyo dadka saboolka ah Qeybteena "ANBOTEK Photovoltaic Business Unit" waxay si firfircoon uga qeybqaadan doontaa tijaabada xirfadeed ee mashaariicda yareynta saboolnimada sawir-qaadista. Falanqee oo qiimee waxqabadka iyo heerka tayada qaybaha PV iyo saldhigyada korantada ee macaamiisha, guud ahaan waxtarka nidaamka, sababaha guud ahaan hoos u dhaca waxqabadka ee modules PV iyo saldhigyada korantada iyo heerka ay saameyn ku leeyihiin; iyada oo ku saleysan baahiyaha maalgashiga iyo maalgelinta, falanqeynta iyo qiimeynta qiimeynta awoodda abuurista tamarta ee warshadaha tamarta ee PV; Cilladaha laga helay hannaanka qiimeynta ee warshadaha tamarta sawir qaadeyaasha ah waxay soo jeedinayaan horumarin lagu hagaajinayo awoodda dhalinta awoodda ee warshadaha tamarta.
"Anbotek Photovoltaic Business Unit" waa hay'ad Jarmal TUV ah oo tijaabisa iskaashato, waxayna mas'uul ka tahay cadeynta qalabka moduleka loo yaqaan 'photovoltaic module' (sanduuqyada isgoysyada, iskuxirayaasha, qorshayaasha dambe, EVA, silikoon, iwm).
"Anbotek Photovoltaic Division" wuxuu ku saleysan yahay photovoltaics GB / T 9535, IEC 61215, IEC 616146, UL 1703, IEC 61730, IEC 61646 iyo heerar kale, oo loogu talagalay soosaarayaasha modullada sawir qaadista, ganacsatada, iwm, si ay u fuliyaan adeegyada tijaabada saddexaad . Bixi CE, UL, CQC iyo adeegyo kale oo shahaadooyin qaran ah.